Wasiirka Arrimaha Gudaha DFS oo Dhuusamareeb gaaray (sawiro) – Radio Daljir
Juunyo 21, 2019 2:40 g 0
Wasiir Maxamed Cabdi Sabriye, Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, iyi wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhow ka degay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug.
Diyaaradda siday wafdiga ayaa si nabad uga degtay garoonka iyadoo markii hore ay soo baxayeen warar sheegaya in ciidamo daacad u ah Madaxweyne Xaaf ay gaadiidka dagaalka la galeen garoonka, si aanay garoonka diyaarad uga soo degin, hase ahaatee warkaas ayaa waxba kama jiraan noqday.
Wasiirka ayaa waxaa wehliya wasiiro ka tirsan Xukuumadda iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, iyadoo garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug, Ahlusuna, iyo siyaasiyiin ka ag dhow Madaxtooyada Villa Somalia.
Xubnaha Wafdiga ayaa waxaa loo galbiyay xarunta Madaxtooyada Dhuusamareeb, halkaasoo ay kula kulmayaan Mas’uuliyiinta Galmudug iyo xubno ka tirsan Ahlu-Sunna.
Isla maanta gelinkii hore ayaa war ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug lagu faray shirkadaha diyaaradaha in aanay soo qaadi karin masuuliyiinta dowladda Federaalka ee ka imaanaya Muqdisho, hase ahaatee amarkaas ayaan maanta ka dhaqan gelin magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah Maamulka Galmudug.
MARTISOOR: Xadgudubka Kenya iyo Xaldoonka Soomaaliya (dhegayso | daawo)